DEGDEG: Madaxweyne Siilaanyo waxa uu xilkii ka qaaday wasiirkii Isgaadhsiinta iyo Taliyahii Ciidanka Badda. |
DEGDEG: Madaxweyne Siilaanyo waxa uu xilkii ka qaaday wasiirkii Isgaadhsiinta iyo Taliyahii Ciidanka Badda.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Mudane, Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo summadeedu tahay, JSL/M/XILQ/249/1-3973/042016 uu xilalkii ay qaranka u hayeen kaga qaaday, Wasiirkii Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta iyo Taliyihii Ciidanka Badda Somaliland.
1. Ujeeddo: Xil-ka Qaadis
Ku: Mudane, Maxamed Jaamac Abgaal,
Sidaa darteed, waxaan kaa rajaynayaa in aad si niyad sami ah ugu wareejiso xilka aad haysay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta, Mudane, Cismaan Garaad Soofe, oo si ku meel gaadh ah u sii hayn doona inta aan cid u soo magacabayo.
2. Ujeeddo: Xil-ka Qaadis
Ku: Sarreeyo Guuto, Maxamed Xuseen Faarax (Xiirane),
Sidaa darteed, waxaan kaa rajaynayaa in aad si niyad sami ah ugu wareejiso xilka aad haysay Taliye Ku-xigeenka Ciidanka Badda Jamhuuriyadda Somaliland, oo si ku meel gaadh ah u sii hayn doona inta aan cid u soo magacaabayo.